Dowladda Japan Oo Dagaal La Gashay GEED Jira 700 Oo Sanno, | afrikada news online
Dowladda Japan Oo Dagaal La Gashay GEED Jira 700 Oo Sanno,
Boosteejada Tareenka Kayashima Station ee ku taalla magaalada Neyagawa oo dhacda Waqooyi Bari caasimadda Osaka ee dalka Japan, waa mid ka mid ah boosteejooyinka tareenka ee leh muuqaalka ugu yaabka badan. Inta badan muuqaal ahaanna waxay ka duwan tahay boosteejooyinka tareenka dalka Japan.
Inkastoo muuqaalkeeda guud uu yahay mid aad u qurxoon oo ku taalla goob dadka oo dhan ay soo camiraan, hadana Boosteejada Tareenka Kayashima Station ayaa waxaa ku dhex yaalla isla markaana lagu dhisay geed weyn oo nuuca loo yaqaano Broccoli Tree ah. Xitaa saqaafka ayuu ka sarreeyaa geedkaani.
Dadka degan magaaladaan waxay geedkaan u garanayaan Big Kusu Tree of Kayashima sababtoo ah geedkaan waxaa garanaaya shaqsi kasta oo ku nool magaaladaan maadaama cimrigiisa lagu sheegay inuu jiro ugu yaraan 700 oo sanno.
Wuxuuna ka weyn yahay Boosteejada Tareenka Kayashima Station taasoo furay sannadkii 1910kii. Markii hore geedkaani wuxuu ku yaallay boosteejada geeskeeda dadka ayaana ku nasan jiray. Waana geed iska cagaaran waqtiga oo dhan.
60 sanno ka dib waxaa sii kordhay shacbiyadda magaaladaan waxaana la go’aansaday in la ballaariyo Boosteejada Tareenka Kayashima Station, laakiin qorsheyaashii la saxiixay sannadkii 1972dii ayaa waxaa kasoo horjeestay shacabka magaaladaan oo sheegay inaan la goyn karin geedkaan taariikhiga ah.